Diiwaangelinta iyo Cadastare ee nidaamka Nidaamka Ganacsiga Qaranka - Geofumadas
Luulyo, 2015 cadastre, Featured, Geospatial - GIS, egeomates My
dalalka maalin walba diiradda on taxanaha e-dawladda halkaas oo geeddi socodka waa fududeeyay in search of bixinta adeeg wanaagsan in muwaadiniinta, iyo sidoo kale xadad hoos musuqmaasuq iyo hawl-xafiiseedyada loo baahnayn.
Waxaan ognahay in sharciyada, hay'adaha iyo nidaamyada ku saabsan hanti kasta oo dalka ka mid ah ay ka duwan yihiin. Si kastaba ha noqotee, shuruucda u adeegta aasaasiga ah ee xaqiiqada xaqiiqa u hoggaansanaanta mabaadi'da diiwaangelinta ee raadinaya himilo isku mid ah: damaanad qaadaya ammaanka sharciga.
Mawduuca Maamulida Dhulka (LADM) wuxuu u taagan yahay mid ka mid ah guulaha ugu qiimaha badnaa marka la eego xeerarka maamulka dhulka; Haddii aan xusuusneyno markii markii la soo bandhigay qaabka Cadastro 2014, waxa uu ahaa uun jilicsanaan wanaagsan, laakiin aragti badan. faa'iido fiican ee caadiga ah waa awood u leh inay jaangooyo kelmedo ka qabashada shayada, sida in Nidaamka Diiwaangelinta Hantida ee lagu lifaaqi karaa in dadaallada heer-gobol doonaya inay xoojiyaan deegaanno transactional diiradda saaray aragti dhul.
Waan ogahay in laga yaabo inay u muuqato inuu yahay sharci-darro sharci darro ah iyo xitaa aan khasaare ahayn, iyada oo ku xidhan fikradaha xarumaha waddan kasta. Si kastaba ha ahaatee, diiradda this article waa wax macquul ah in Registry iyo Cadastre, ka baxsan in ay jasiirad, waxay karaa (data aad, iyaga oo aan), biiraan geedi socodka transactional kaabayaasha xogta.
Waxaa la fahamsan yahay in inkasta oo ruuxa this article waa farsamada, LADM waa sidaas oo sharaf leh islana shuruucda iyo hay'adaha dalka kasta, iyada oo aan halmaamay in reengineering waa in aan u tudhin.
Xogta guud ee xogta
Jaantuska dhammaadka qodobka ayaa muujinaya sida qaybaha muhiimka ah ee LADM uu noqon karo nucleus kaas oo hababka kala duwan ee isdhexgalka, iskuxiraya qaybaha Nidaamka Xuquuqda Hantida, ma aha oo kaliya khuseeyo hanti ma guurto, laakiin sidoo kale waa la guuri karaa. Qodobbada ugu muhiimsan ee ficilka diiwaanka waxaa lagu arkay bartamaha:
Nidaamka diiwaangelinta, oo laga yaabo inay noqoto qulqul, baabuur, markab, oo leh ama aan lahayn dardargelin cadawga, iyada oo la raacayo farsamooyinka sheekada shakhsiyeed ama sheyga dhabta ah.
Xisbiyada danaynaya; dadka dabiiciga ah, kuwa sharciga ah ama kooxo aan rasmi ahayn. Dhammaan kuwa ka qaybgalaya silsiladda geeddi-socodka wax-qabadka.
Kharashyada sharciga iyo maamulka; cilaaqaadka xuquuqda, xaddidaadda ama masuuliyada saameynaya isticmaalka, lahaanshaha ama shaqeynta alaabta.
Xaqa u dhaxeeya shayga iyo dhinacyada xiisaha leh, diiwaan gashan ama xaqiiqda. Heerka, xitaa sharcigu waxaa loo aqoonsaday inuu yahay culays sharci.
Inkasta oo ayan iyagu yihiin xubno kaliya yihiin kuwa xoogga falalka jilayaasha la xiriira macaamil: bangiga, ka nootaayo, sahmiyaha, farsamo khariidaynta, kuwaas oo ma aha waxaan daneeyayaasha kale ee leh doorar kala duwan.
Sidee loo wacaa iyaga iyo sida loo qaabeeyo? ISO: 19152
Suurtagalnimada isdhexgalka geeddi-socodka ee hoos-yimaad muhiim ah
Xaqiiqdu waxay tahay in xubno ka mid ah ku jira geedi kala duwan ee dalka ah, waxay ka mid yihiin dadka isku mid ah in Register rasmiga ah ee gacanka ujeedooyin doorashada, isla dadka muuqashada qabashada nidaamka canshuuraha, fasaxaya hawlgalka ganacsiga, hanaanka dhismaha, warshadu hawada baasaboor, iwm.
Dabcan ma fududa in la dejiyo siyaasadaha dadwaynaha si loo qiyaaso tan. Tusaale ahaan, cibaarada tukashada oo ku qasban diiwaan-hayaha in uu isticmaalo magaca kaliya sida nootaayadu u abuurtay. Markaa xitaa haddii María Albertina Pereira Gómez ay ku taal saldhiga dadka, iyo nootaamada María Albertina Pereira de Mendoza, waxay abuuri karaan qof kale, haddii nidaamku uusan haysan nidaam isku dhafan ama maareyn kale.
Waxay yihiin hantida isku midka ah ee lagu soo oogay canshuuraha, kuwa ku jira oggolaanshaha, kuwa hela xayiraad isticmaalka, iwm.
Sidaa daraadeed waddan kobcinaya mawaadiic macaamil ganacsi, kiisaska Diiwaangelinta Dhulka iyo Cadastre ayaa ah kaliya isticmaale kale, doorarkooda Diiwaangelinta iyo Sharciga. Ha'yadaha kale waxay u dhaqmaan doorarkooda sida Risk Management, Qorshin dhuleed, Qorsheyn, Urur, Horumarinta Dhaqaalaha, Kaabayaasha, iwm.
Dhexdhexaadinta jasiiradda, Diiwaangelinta Dhulka ayaa noqota qayb muhiim ah oo ku saabsan habka socodsiinta. Waxba ma ahan meesha aad bilowdo geeddi-socodka, haddii notary ee bangiga, degmada ama cidda mas'uulka ka ah soo saaray horyaalka, diiwaangelinta + Cadastre dar xaalada ku haboon:
Haddii hay'ad ay qorsheyso dhismaha biriijka, Diiwaangelintu waxay ku siinaysaa macluumaadka ku xiran guryaha hantida dadweynaha ama kuwa gaar loo leeyahay oo ay ku yaalaan; design heer-shay Tani helo aqoonsi ku ah nidaamka kaabayaasha, iyadoo la isticmaalayo macluumaadka ka Register wadci ay ku jiraan model ah digital dhul, sifooyinka dhulka iyo macnaha of isticmaalka. wax la mid ah waxa lagu tilmaamay System Investment Dadweynaha bixinta miisaaniyadda, iyo mar kayd dhisay 500 mitir saameeya sirqoollada degdeg ah oo muujinaysa xeerarka for soo galo dhismaha dhulka gaarka loo leeyahay iyo sidoo kale gobolka of channel waa la diiwaangeliyaa hoos u dhicin leh mamnuucida soo saarista ruqsadaha loogu talagalay soo-saarka wadajirka. Ugu dambeyntii, mar haddii shaqadii dhammaatey ay bixiso dakhliga dawladda hoose si ay u qaataan wareeg ah dayactir marmar ah.
Laakiin dhammaan xogta, waxay galaan Nidaamka Record of kuwaas oo wadaaga xogta caadiga ah. Diiwaangelinta / Cadastre ayaa kaliya muujisay adeegga goobta, laakiin dib u soo celinta waxay heshay sharciyo saameynaya guryaha isku xiran.
Sidaa daraadeed, hay'ad kastaa waxay ku tiirsan tahay kaalinteeda heerkooda takhasuska ah, helitaanka waxtarnimada adeegga iyo kor u qaadida horumarinta, taas oo ah waxa ugu dambeyntii lagu xisaabtami karo danta guud, haddii aan xisaabta ku darno in hoos u dhaca qiimaha iyo wakhtiyada hal element oo kaliya oo ku xiran xukuumadda xaaladaha kala duwan ee la xiriira horumarinta sida teknolojiga iyo ilaha kale.
In la caddeeyo in tani aysan micnaheedu ahayn beddelidda doorarka, kartida iyo mabaadiida ay raacayaan Diiwaanka Hantida. Taas bedelkeeda, waxaa loo qoondeeyey Nidaamka Mideysan ee Diiwaanka, halkaasoo Cadastre uu yahay mid kale oo rikoor ah, kaas oo noqon doona spatial_unit oo ku xiran isqorista Real Folio. Maaddaama ay tahay diiwaanka iyo xeerarka dalabka dhuleed, maadaama ay tahay diiwaanka iyo diiwaangelinta gaadiidka, maraakiibta, iwm.
Naqshadaha adeegga ku saleysan
Waxaa cad in heerarkaasi ay u baahan tahay aragti balaadhan oo waddanka ah, inkasta oo aysan ahayn wax xariif ah xitaa dalalka soo koraya. Maalin kasta waxay maamushaa hay'adaha dawliga ah, xirfadleeyaal badan oo leh karti ay ku abuuri karaan kooxo kala duwan oo u arkaan maamulka dadweynaha oo leh aragti la mid ah shirkadaha waaweyn ee ay yimaadaan. Tani waa kiiskii la qabsashada ee ku jiray moodeelo halka degmada ay u muuqato inay tahay qaab quruxsan oo ay jirto wax soo saarka, saadka, qaybinta, liiska, maraakiibta, qaansheegadka iyo xisaabinta; inkasta oo xajmiga awoodda iyo xukunka dib loo dhigo. Taasi waa sababta nidaamyada dhaqameed ee degmooyinka degmooyinka ERP ay aad u guulaysteen.
Laakiin nidaamka sida aan ka hadleynay, ma qaadan karnaa waxa la qorsheyaasha horumarka desktop iyo macmiilka-server shaqeyn doonaan. Saas ma for this codsiga naqshadaba multilayer waxaa loo baahan yahay orientation adeegga, halkaas oo horumarinta layers bandhig kala soocan yihiin ka macquulka ah ganacsiga, oo ay gacanta ku baaraandegidda matoorada ku qoran luqadaha sida nadaam Geeddi-socodka ganacsiga iyo Qaabka jibbaarada asalka (BPMN 2.0) . Sayidka, hababka fudud sida abuurista mortgage ah, ama sida adag sida individualization ee magaalaynta, lagu giirte karaa hay'adaha hawl-oriented, a adeegyada korontada, sida in aanay ahayn lagama maarmaan si ay u horumariyaan gaar ah adeeg kasta laakiin Ku dheji farsamooyinka guud.
Naqshadaha adeegga ku salaysan waxay sahlaysaa nolosha iyo dayactirka nidaamyada waaweyn, iyadoo dadka isticmaala ay sameeynayaan waxa kaliya ee ay yihiin takhasusle; iyada oo aan loo eegin meesha ay yihiin, farsamayaasha GIS waxay sameeyaan hawlgal qadiimiga ah oo burburiya hantida, dhaxalgaliya xuquuqda diiwaangelinta ee Folio Real oo aan ka soocin joomatari. Sidaa daraadeed isku-dubbarididda nidaamyada sida Xafiiska Hore ee Dib-u-celinta ma ahan xaalado adag, sababtoo ah Nidaamka waa mid ugu muhimsan; waxa kaliya ee lagama maarmaanka u yahay inay ku xirmaan daaqada bandhigga adeegga halkaas oo adeegga macaamiisha ee aagga ka shaqeeyaa kala qaybsan yahay.
Faa'iidooyinka isticmaalka LADM
Midda ugu fudud, laga bilaabo qoraallo sameeyay 20 sano ka hor:
Qaab nololeed dheer
Taasi waa sababta mid ka mid ah caqabadaha degdega ah ee sahamiyeyaal cusub iyo xirfadlayaasha ku jira geomatics, waa inay bartaan inay fahmaan moodeelooyinka. Jaangooyo waxay u oggolaaneysaa in ay u dhiganto semantics si ay u noqoto mid gaar ah, oo kaliya inaad u sheegto horumariyaha: codso ISO: 19152. Waxaan jeclaan lahaa inay fudud tahay, laakiin way sahlan tahay marka la sugayo kuwa kale inay yimaadaan oo ay yiraahdaan Nidaamka Hantida waa inuu shaqeeyaa, marka dadyaweynaha iyo boodhadhkuba yihiin khabiiro.
Wixii ka mid ah shaki ...
Caqabadda xiisaha leh ee miiska la soo koobay ee aan ku soo laabtay iyo wixii aan la wadaagay arrintaas danaha dimuqraadiyeynta aqoonta maanta aan dib loo noqon karin. Ogow in dareenka uu sababay tiknoolajiyadu ay tahay in ay ahaato bukaanno adag oo ka mid ah kaalinta hay'adeed, iyada oo aan taas oo aan macquul ahayn in la keeno xaqiiqda.
Dhammaadka maalinta, maqaalku wuxuu u egyahay sida sawiraadda sayniska -maanta-. Laakiin tusaale ahaan dalka aan la hadlayo ku saabsan, oo kaliya in machadka sheegay 11 sano ka hor marka aad lahaa qabyada ah Sharciga cusub Property, la abuuro of hay'ad in ay ka mid gudahood silsilad isku mid ah amarka Cadastre, Register iyo National Geographic. Hay'adaha ujeedooyin kala duwan - haa - Sababtoo ah waxay kor u kaceen; laakiin waa inaad tagtaa dhaqanka wanaagsan ee deriska ah oo aad sigaar cabto sigaar wanaagsan oo aad u aragto meesha ay ku socdaan. Gaar ahaan ma naqaano markii aan heleyno shanta daqiiqo ee fursada ah in aan wax qabano.
Mabaadi'da aasaasiga ah ayaa si tartiib ah u kobcaya, cadaadiska tiknoolajiyadu marnaba ma barbar dhigi karayaan. Taasina waa sababta ay heerarka heerkulku u dheelitiraan. Sanadaha 8 dib-u-horumarinta tiknoolajiyadda ayaa had iyo jeer bixisa sababaha, inkasta oo hay'aduhu ay qaadato ku dhowaad 30 si loo ogaado.
Post Previous«Previous horumarinta Software Free sida engine ah ee isbedelka
Post Next Marka la barbardhigo iyo khilaafaadka u dhexeeya QGIS iyo ArcGISNext »
Hal Jawaab u dir "Diiwaangelinta iyo Cadastare ee ku yaalla nidaamka Nidaamka Ganacsiga Qaranka"
ELVISPZ isagu wuxuu leeyahay:
Waa maxay qodobo aad u wanaagsan, waxaan horeyba u raadin lahaa qalabka wax walba !!! Wowlada!